काठमाडौं । नेपालका सन्तोष शाह बीबीसीको यूके मास्टरशेफ प्रोफेशनल्स रिम्याच २०२१ का विजेता बनेका छन्। प्रतिस्पर्धामा आफूले पस्केका तराई, हिमाल र पहाडका विविध नेपाली परिकारलाई निर्णायक मण्डलका सदस्यले निकै मन पराएको शाहले बताए। मलाई एकदमै गर्व महसुस भइरहेको छ, नेपाली खानालाई हेला गर्ने र आफैँमाथि विश्वास नहुनेहरूलाई एउटा ठूलो सन्देश दिन पाएकोमा मलाई एकदमै खुशी लागिरहेको छ,उनले बीबीसीसँग भने।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले नेपालीदेखि विदेशीसम्मले उनलाई बधाई दिइरहेका छन्। नेपाली परिकार विश्वभरि चर्चित फ्रेन्च खानालाई पनि टक्कर दिने खालका छन्’ सन्तोष शाहका निम्ति मास्टरशेफको फाइनलमा पुग्दा ुसपना साकार भए जस्तै यसअघि यूके मास्टरशेफमा उपविजेता भएका शाह ठूलो अपेक्षाको भारी बोकेर रिम्याचमा गएको बताउँछन्।
ूरिम्याचमा जाँदा नै धेरै ठूलो दबाव थियो। किनभने नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइबाट एक प्रकारको नाम र ख्याति पहिल्यै प्राप्त भइसकेको थियो, अहिले म हारेको भए एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो,उनले थपे।
यसपालि के गरे ?
यूके मास्टरशेफमा उपविजेता भएको केही समयपछि नेपाल आएर शाहले थप नेपाली परिकारहरूबारे अध्ययन गरे अनि पकाउन पनि सिके। नेपालमा धेरै राम्राराम्रा परिकार छन्। तीमध्ये केहीलाई छनौट गरी तराईमा बनाइने अदौरी, तिलौरीदेखि राई(लिम्बु समुदायले कुखुराको पखेटा पोलेर बनाउने तीते लगायतका परिकार यसपालि मैले देखाएँ। यही चिजले मलाई जित दिलाएका छन्।ू
प्रतिस्पर्धामा यसपालि आफूले पस्केका हरेक परिकारलाई निर्णायकहरूले निकै मन पराएको उनी बताउँछन्। यसपालि उनले म्यारिनेटेड चिकेन ब्रेस्ट, तामाको अचार, कुखुराको मासुको झोल, कोदोको पुलाव, मालपुवा र भुइँकटहरको राबडी लगायत परिकार बनाएर खुवाएका थिए।त्यसैगरी सुपको आइसक्रीमका साथै तरुल, काउली, भन्टा, आलु लगायतका सात प्रकारका तरुवा बनाएर खुवाएको उनले बताए।
अघिल्लोभन्दा कसरी फरक ?
अघिल्लो प्रतिस्पर्धाभन्दा रिम्याच झन् चुनौतीपूर्ण भएको शाह बताउँछन्। त्यसमा त एउटा राउन्डमा गरेको भुल सुधारेर अर्कोमा अझ राम्रो गर्न सकिन्छ। तर रिम्याचमा जे एक पटक गर्नुहुन्छ त्यो नै अन्तिम मौका हुन्छ,ू उनले भने। अझ रिम्याचमा पहिलाका उपविजेताहरू पनि खारिएर आउनले भएकोले चुनौती थपिएको उनको बुझाइ छ। पहिल्यै एउटा उचाइमा पुगिसकेका प्रतिस्पर्धी हुन्छन्। तपाईँमाथि राम्रो गर्नका लागि उच्च दबाव हुन्छ।ू
निर्णायकको प्रतिक्रियाबाट उत्साहित
प्रतिस्पर्धामा निर्णायकहरूको प्रतिक्रियाबाट आफू निकै उत्साहित भएको उनले बीबीसीसँग बताए। निर्णायकमध्ये एक मोनिका गालेटीले सन्तोष शाहले पाएका हरेक परिकार खाँदा उनीसँगै आफूले नेपालको यात्रा गरिरहेको जस्तो महसुस गरेको बताइन। शाह नेपाल जाने बेला आफू पनि सँगै जाने इच्छा पनि उनले जाहेर गरेकी थिइन्। बिबिसी